Ny Xiaomi Mi 8 dia amidy ao anatin'ny 37 segondra amin'ny andro voalohany ao Shina | Androidsis
Eder Ferreno | | Android Android, Finday, Xiaomi
Herinandro lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi 8. Ny avo lenta vaovao, izay mampanantena fa iray amin'ireo telefaonina be mpiresaka indrindra amin'ity taona ity, dia efa natomboka tany Sina. Ny fanantenana talohan'ity fanombohana ity dia avo indrindra, satria mampanantena izy io fa ho iray amin'ireo telefaona be mpividy indrindra amin'ny famaranana amin'ny taona 2018. Ary tsy diso fanantenana izany.
Satria tsy latsaky ny iray minitra vao lany tanteraka ny tahiriny amin'ity andro voalohany amidy ity. Ny varotra an-tserasera an'ity Xiaomi Mi 8 ity dia goavana. Navoitran'izy ireo indray ny fahefana lehibe fampiantsoana ny marika sinoa.
37 segondra ny totalin'ny faharetan'ny fivarotana ireo singa avo lenta rehetra amin'ity varotra voalohany ity izay efa natao tany Chine. Na dia hatreto aza ny isan'ny telefaona efa namidy tamin'ity andro voalohany ity dia tsy mbola naseho.
Iray amin'ireo tombony lehibe, ary ny antony mahatonga an'io Xiaomi Mi 8 mivarotra tena tsara io dia ny vidiny. Araka ny efa fantatrareo, ireo finday marika sinoa dia fantatra amin'ny vidiny ambany. Zavatra izay nanampy ny marika amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanitarana iraisam-pirenena sy ny fireneny. Ity fahombiazana ity dia mampiseho azy indray.
Amin'izao fotoana izao ny varotra flash any Chine manaraka dia hatao amin'ny 12 Jona. Raha mahita ny fomba fiasan'ity voalohany ity dia efa azo antenaina fa ny manaraka dia ho fahombiazana vaovao ary ny Xiaomi Mi 8 dia hamidy afaka segondra vitsy. Maneho ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny firenenao.
Mandritra izany fotoana izany, ireo mpampiasa ivelan'i Shina dia tsy maintsy miandry ela kokoa vao hividy an'ity Xiaomi Mi 8. Na dia I Espana dia iray amin'ireo tsena valo hamoahana amin'ny fomba ofisialy ilay fitaovana. Fa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry kely kokoa ny fahatongavany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi 8 dia amidy ao anatin'ny iray minitra latsaka ao Shina